Ambany Alokalok’i Shina : Hivarotra Ny Fahalalahana Akademika Ve Ny Oniversite Taiwaney? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Marsa 2017 5:19 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Ελληνικά, Español, 繁體中文, English
Mpampianatra ao amin'ny Oniversite Fan Yun mihazona sora-baventy mivaky hoe “Izaho no Fan Yun ao amin'ny Oniversiten'i Taiwan, tsy amidy ny Fahalalahana Akademika .” Sary avy amin'i Fan Yun tao amin'ny News Bloom.
Nosoratan'i Brian Hioe ny lahatsoratra tany am-boalohany ary nivoaka tao amin'ny New Bloom tamin'ny 7 Martsa . Navoaka indray eto amin'ny Global Voices ity dikan-dahatsoratra manaraka ity araka ny fifanarahana fiaraha-miasa amin'ny famoahana votoaty .
Nampisavorovoro ny fiarahamonina Taiwaney tamin'ny herinandro lasa ny fanambarana vao haingana fa oniversiten'i Taiwan miisa 80 raha kely indrindra amin'ny 157 no nanao sonia fifanarahana tamin'i Shina, nampanantena mba tsy hiresaka ny olan'ny fampiraisana/fahaleovantena na ny resaka “Shina tokana, Taiwan tokana” ao am-pianarana .
Anisan'ireo Oniversite ireo ny ivontoerana mpitarika amin'ny toeram-pianarana ao Taiwan, anisan'izany ny Oniversite Nasionaly Tsing Hua ,ny Oniversite Nasionaly Chengchi sy ny maro hafa ary ireo ivontoeram-panjakana sy ny tsy miankina ihany koa.
Na izany aza, nilaza ireo sekoly fa tsy midika ho fanekena ny “Fotokevidehiben'ny Shina Tokana” ny fanaovan-tsonian'ny fifanarahana izay milaza fa faritra tsy azo esorinahiala amin'i Shina i Taiwan .
Ny resaka fampiraisana/fahaleovantena no sehatra ifaninanana ara-politika ao amin'ny sekoly ambaratonga faharoa satria tsy maintsy ankatoavin'ny Ministeran'ny Fampianarana ny fandaharam-pianarana amin'ny fanabeazana fototra sy ny bokim-pampianarana. Feno mpanao fihetsiketsehana tamin'ny Aogositra 2015 ny Minisiteran'ny Fampianarana noho ny ezaka nataon'ny antoko mpitondra teo aloha Kuomingtang mba hanosehana ny fanitsiana ny tantara izay manome endrika an'i Taiwan sy Shina ho fikambanana ara-politika tokana hatramin'ny Fiankohonana Ming tao amin'ny kilasin'ny lisea.
Na izany aza, tamin'ny ankapobeny, heverina fa mankafy ny fahalalahana miteny ny oniversite Taiwaney satria manana ny fahafahana hamolavola ny fandaharam-pianarany ireo mpampianatra. Tsy nampoizin'ny maro noho izany ny fifanarahan'ny oniversite tamin'i Shina.
Nikarakara fanangonan-tsonia manameloka ny fifanarahan'ny oniversite ireo mpampianatry ny oniversiteTaiwaney toa an'i Fan Yun ao amin'ny Antoko Sosialy Demaokraty sy i Lai Ting-Ming, filohan'ny Oniversite Shih Hsin teo aloha.
Namoaka fanambarana iraisana ho fanamelohana ny fifanarahana miafina ny fikambanan'ny Oniversite, anisan'izany ny Fikambanan'ny Mpianatra sy ny Fikambanan'ny Mpianatra Nahazo Diplaoma ao amin'ny Oniversite Nasionaly Taiwan .
Ankoatra izany, nisy ny fanentanana an-tserasera izay nokarakaraina mba hanaovana antso amin'ny mpianatra sy ny mpampianatra ao amin'ny oniversite amin'ny fakana ny sarin'izy ireo manokana milanja sora-baventy izay milaza ny anarany, ny sampana misy azy, ary ny soratra manao hoe ” Tsy amidy ny fahalalahana akademika”.
Na izany aza, tsy mahagaga mihitsy ny fifanarahana araka ny hita ankehitriny eo amin'ny sehatry ny sekolim-pampianarana ambony ao Taiwan.
Mihazona ny fironana amin'ny fifandraisana tsara amin'i Shina ny fitantanan-draharahan'ny Oniversite mba hisarihana ny Shinoa anaty fifanakalozana mpianatra, izay tsy azo hamaivanina any amin'ny oniversite sasany ny fisian'izy ireny.
Raha ny momba ny fihenam-piterahana ao Taiwan, tsy maintsy maka antoka ny fitantanan-draharahan'ny Oniversite fa feno tsara ny fisoratana anaran'ny mpianatra mba hanodinana hatrany ny sekoly . Toa ny fanodinana ny sekoly amin'ny alalan'ny fisarihana mpianatra Shinoa no vidin'ny fahalalahana akademika araka ny voalazan'ny fifanarahana.
Fa ho an'ny oniversite Taiwaney izay mikasa hahazo tombony lehibe, midika fidiram-bola bebe kokoa ny mpianatra Shinoa avy any amin'ny tanibe maro kokoa satria tsy maintsy mandoa saram-pianarana manakaiky ny avo roa heny mihoatra ny an'ny mpianatra Taiwaney any amin'ny sekoly sasany ny mpianatra Shinoa tanibe .
Ny fivarotana ny fahalalahana akademika no lojika ao ambadiky ny fifanarahana izay mitovy amin'ny fivarotana orinasa fampahalalam-baovao ao Taiwan tamin'ny vondrona Shinoa. Samy manana ny vidiny ny fahalalahan'ny fanaovan-gazety sy ny fahalalahana akademika.
Mandritra izany fotoana izany, hita fa mandray anjara mavitrika ao amin'ny Hetsika Sunflower sy ny hetsika ara-tsosialy miandany amin'ny fahaleovantena ny mpianatra Shinoa, miaraka amin'ny mpianatra iraisam-pirenena hafa mianatra ao Taiwan ary mampanahy an'i Shina ny mijery ireo tanorany mivelatra be loatra amin'ny fikatrohana amin'ny hevi-baovao sy ara-politika .
Manana ny antony mahamailo azy i Beijing. Vao haingana, nandray anjara tamin'ny hetsika LGBT ao Taiwan ny mpianatra Shinoa sasany mianatra ao an-toerana, ary nanao fanamarihana fitsikerana momba ny politikam-panjakana Shinoa ny sasany. Azo heverina ho toy ny fepetra mba hitazomana ireo mpianatra Shinoa tanibe hiala amin'ny fanohanana ny fironana mankany amin'ny fahaleovantena ny fifanarahan'ny oniversite .
Ho setrin'ny fanahian'ny vahoaka momba ny fifanarahana miafin'ny oniversite tamin'i Beijing, nanamafy ny Minisiteran'ny Fampianarana fa hanome antoka fa afaka manohy ny fianarany any Taiwan ireo mpianatra avy amin'ny Fifanakalozana mpianatra, ary hiaro ny fahalalahana akademika .
Nisavoritaka ny Taiwaney maro , na izany aza, fa namidy izy ireo.